FHCT-S ကမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖျအကွေ့အကောက်များသောစက်, အဲဒါကိုသုံးပြီးပြင်ဆင်နေဆေးဆိုးမရောက်မီအဘို့အအဓိကအားင်, ကွမ်းသီးများကဲ့သို့အကွေ့အကောက်များသောများအတွက်ဝတ်စုံ, သိုးမွှေးကြိုး, acrylic ကြိုး, polyester မျှင်နှင့်စသည်တို့ကို, ထိုသို့ Conical Cone သို့မဟုတ် Tube ဆေးဆိုး bobbins အတူတက်ယူနိုင်ပါသည်. ဒါဟာအမြင့်စွမ်းရည်၏အင်္ဂါရပ်ရှိပြီးကောင်းစွာယူ-up, ချောပုံသဏ္ဍာန်, လာမယ့်အပြောင်းအလဲနဲ့အလုပျအတှကျအလုပျသမားမြား၏ပြင်းထန်မှုသက်သာစေနိုင်ကြောင်းနိုင်ပါတယ်.
1. မောင်း: မော်တာနှုန်းတိုင်းဗိုင်းလိပ်တံ
2. အကွေ့အကောက်များသောမြန်နှုန်း: ဝါ: 700M / မိနစ်အကြောင်းကို, အမှငျြ: အကွောငျး 600 M က / မိနစ်
3. Anti-ခက်-Edge နှင့်အီလက်ထရောနစ် Anti-Stack ၏ function ကိုရှိပါတယ်.
4. package DIA≤ 220မီလီမီတာ
6. အဆင့်မြင့် control panel ကို;
လွန်ခဲ့သော : ဖယောင်း spool polyester ဖျချည်ခင်စက်အကွေ့အကောက်များသော
နောက်တစ်ခု : မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖျ groove စည်ချည်ခင် Cone Winder / အကွေ့အကောက်များသောစက် / Bobbin Winder စက်